Maamulka Hobyo oo soo furtay doon afduub loo heystay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maamulka Hobyo oo soo furtay doon afduub loo heystay
Maamulka Hobyo oo soo furtay doon afduub loo heystay
Guddoomiyaha degmada Hobyo, Cabdullaah Axmed Cali, oo la hadlay Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA, ayaa sheegay in iyagoo kaashanaya guurtida deegaanka ay soo furteen doon ganacsi oo ay xeebaha Galmudug ku heysteen kooxaha burcad badeedda Soomaalida.
Guddoomiyaha ayaa SONNA u sheegay in iyadoo la adeegsanayo awood ciidan la soo badbaadiyay labo kamid ah shaqaalaha doonta Al Kowsar oo dhalashadoodu tahay Indian iyo doontii afuubka loo heystay.
“Ciidamo si gaar ah u tababaran oo kaashanay odayaasha deegaanka ayaa soo furtay doon u rarneyd ganacsato Soomaaliyeed iyo laba kamid ah shaqaalihii la socday doontaasi oo dhawaan laga soo afduubtay xeebaha u dhexeeya Soomaaliya iyo Yeman, hadda shaqaalahaasi wey caafimaad qabaan doontiina gacanteena ayay ku jirtaa” ayuu yiri Mudane Cabdullaahi Axmed Cali.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in ciidamada Ammaanka ay hadda hu howlan yihiin sidii u soo badbaadin lahaayeen sideed kamid ah shaqaalihii la socday doonta, kuwaas oo burcadbadeeddu hore uga dajiyeen doonta isla markaana lagu hayo dhulka xeebta ah deegaanada Galmudug.
Ugu dambeyntii maamulka degmada Hobyo waxa ay sheegeen in aan la aqbali karin in falal burcad badeednimo la xiriira laga abaabulo deegaankooda, isagoo ugu baaqay burcadbadeedda in ay xorriyaddooda u soo celiyaan muwaadiniinta Hindida ah ee ay afduubka ku heystaan.
Previous articleTaliyaha cusub ee booliiska oo xilka la wareegay
Next articleGuddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose oo Wanla weyn kula kulmay odoyaal iyo saraakiil ciidan